Jadwalada Diiwaangelinta Dugsiga oo lagu soocay Nooca Dugsiga | Boston School Finder
Jadwalada Diiwaangelinta Dugsiga oo lagu soocay Nooca Dugsiga
Bogaan o PDF ah kuna qoran Af-Ingiriis halkaan kasoo dagso.
Ma jiro hal isdiiwaan gelin ama nidaamka codsi oo ka dhexeeya dhammaan 200+ dugsi ee kuyaala Boston. Waa kuwaan tallaabooyinka lagu codsan karo nooc kasta oo kamid ah dugsiyada kuyaala Boston iyo goorta aad u baahan tahay inaad dhammaystirto tallaabooyinkaan nooc kasta oo dugsi ah sannad dugsiyeedka 2020-2021.
Ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6aad, 7aad, iyo 9aad
Xiliga aad is qorayso: Janaayo–Feebaraayo (diiwaan galinta ugu muhiimsan)
Dhammaan waalidiintu waa inay ka qoraan caruurtooda fasaladaan.
Qoysaska caadiyan waxaa lagusoo wargaliyaa dugsiga BPS ee cunugooda laga qoray marka la gaaro dhamaadka Maarso.
Booqo DiscoverBPS.org si ad u billoowdo diiwaangalintaada.
Ardayda galaaya fasalka K2 iyo dhammaan fasalada kale
Xiliga aad is qorayso: Feebaraayo–Maarso (diiwaan galinta ugu muhiimsan)
Dhammaan waalidiintu waa inay ka qoraan caruurtooda fasalka k2.
Qoysaska caadiyan waxaa lagusoo wargaliyaa dugsiga BPS ee cunugooda laga qoray marka la gaaro dhamaadka Maayo.
Dugsiyada Commonwealth Charter
Ardayda galaaya dhammaan fasalada
Xiliga aad codsanayso: Dhammaadka Feebaraayo
Aqbalaada aad ka hesho Dugsiyada Commonwealth charter ka ah waxaa lagu go'aanshaa nidaam qori tuur ah.
Dhammaan waalidiintu waa inay carruurtooda ka qoraan nidaamka bakhtiyaa-nasiibka dugsi charter ah dhammaadka Feebaraayo.
Qoysaska caadiyan waxaa lagu soo wargaliyaa aqbalaadaha dugsiga iyo/ama go'aanada la xariira liiska sugitaanka bisha Maarso.
Booqo www.applybostoncharters.com si aad u codsato bakhtiyaa-nasiibka dugsi charter ah.
Dugsiyada Gaarka loo leeyahay (Kuwa Diimaha iyo Kuwa Madaxa Banaan)
Xiliga aad codsanayso: Caadiyan Diseembar—Janaayo (way kala duwan tahay dugsiga)
Dhammaan dugsiyada lacagta lagu dhigto waxay leeyihiin habraacyadooda gaarka ah ee qorista ardayda iyo jadwalo ayaga u gaar ah.
Ka fiiri boggaga ay sida gaarka ah ugu leeyihiin dugsigu barta Boston School Finder wixii xog dheeraad ah, ama webseetyada gaarka ah ee dugsiyada si aad u hesho xog la xariirta taariikhaha muhiimka ah, shuruudaha codsiga, iyo xiliga kama danbaysta u ah codsiga caawimaada dhaqaale.
Xafiiska Dugsiyada Kaatooliga ah, Archdiocese of Boston (dugsiyada ay leeyihiin ururada diimaha)
AISNE: Ururka Dugsiyada Madaxa Banaan ee ku yaalla New England (Dugsiyada madaxa banaan)
Xiliga aad codsanayso: Oktoobar–Janaayo
Laga bilaabo sanadka 2019, aqbalaadda barnaamijka METCO waxaa lagu go'aamin doonaa bakhtiyaa-nasiib.
Diiwaan galinta bakhtiyaa-nasiibka ah ee METCO wuxuu furmayaa Oktoobar wuxuuna soo xirmayaa Billoowga Janaayo.
Bakhtiyaa-nasiibka METCO wuxuu socon doonaa horaanta illaa bartamaha Janaayo.
Degmooyinka soo gudbinta ayaa ardayda qorta waqti kasta oo u dhaxeeya Feebaraayo iyo Oktoobar. Qoysaska waxaa lagu wargaliyaa degmooyinkooda loo gudbiyay marka boosas banaanaaaan, ayadoo la raacaayo nambarkooda bakhtiyaa-nasiibka.
Qoysasku waa inay raacaan qorshayaasha kale ee dugsiga ilaa loo xaqiijiyo diiwaan galinta degmada katirsan METCO.
Booqo webseetka METCO si aad u codsato bakhtiyaa-nasiibka METCO.